ငါးကြင်းငါး: မျိုးစိတ်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ ငါး၏
ကားလို့စ်ဂါရစ်ဒို | | ရေချိုငါးမွေးကန်, ရေအေးငါးမွေးကန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးမွေးကန်ထဲသို့ထည့်ရန်ငါးအမျိုးမျိုးဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားလာသည်နှင့်အမျှအလွန်ကြီးမားသောအရွယ်အစား၊ အရောင်များစသည်တို့သည်အမှန်တကယ်မတူကွဲပြားသောမျိုးစိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်ဖွင့်လှစ်သည်။ သို့သော်ဤကြွယ်ဝသောမတူကွဲပြားမှုများအတွင်းငါးတစ်ကောင်သည်အခြားငါးများထက်ပိုသောကြောင့်လူကြိုက်များသောလက္ခဏာများကြောင့်ဖြစ်သည်။ တဲတွေအကြောင်း၊ ၏တဦးတည်း ရေအေးငါး အသုံးအများဆုံး။
2 Kois ငါး
3 ကျွန်ုပ်တို့၏ Kois သို့မဟုတ် Carp ကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်နည်း။
Common Carp (Cyprinus carpio) သည်ဥရောပနှင့်အာရှတိုက်များမှဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည်ရေချိုငါးတစ်ကောင်ဖြစ်သည် ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးသင်နေထိုင်သည့်နေရာနှင့်ပိုမိုသင့်တော်သည်ထို့ကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ၏အဆိုအရ၎င်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ထောင့်မှန်သမျှကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသောဂြိုဟ်မျိုးစိတ် ၁၀၀ ၏စာရင်းထဲသို့ ၀ င်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့သည်။
များသောအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနမူနာများသည်အကြားကွာခြားသည့်အရှည်ကိုရောက်ရှိသည် 60 နှင့် 90 စင်တီမီတာနှင့်ပတ်လည်သောအလေးချိန်9ကီလိုဂရမ်.
သင်သိလား ငါးတစ်ကောင်ဘယ်လောက်အသက်ရှင်သန်နေသလဲ တဲကြီးလား ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအရအချို့သောနမူနာများသည်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်အခြေအနေအချို့ကိုခံစားခဲ့ရလျှင် ၁.၂ မီတာအထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးအလေးချိန် ၄၀ ကီလိုဂရမ်ရှိပြီးနှစ် ၆၀ ကျော်လွန်နိုင်သည်။ သူတို့သည်အပူချိန် ၁၇ နှင့် ၂၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိနေသရွေ့တည်ငြိမ်ပြီးအနည်းငယ်သောဆားငန်ရေများတွင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သည်။
အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည် အချစ်ဆိုတာ, နှင့်၎င်း၏အစားအစာရေနေအပင်များ, အင်းဆက်ပိုးမွှား, အသေးစား crustaceans, ပါဝင်သည် မွေးမြူရေးရာသီသည်နွေ ဦး ရာသီတွင်စတင်ပြီးရေတိမ်ပိုင်းနှင့်သိပ်သည်းသောရေတွင်ဖြစ်ပျက်သည်။
အမျိုးသမီးများသည်အိပ်ရန်ရကြသည် 300.000 huevos အရာ, ရေအပူချိန်ပေါ်မူတည်။ 3-4 ရက်အကြာမှာပေါက်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးသည်အသက် ၄ နှစ်အရွယ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုသို့ရောက်သည်။ အူရီရီရီရီအူရီယယ်သည်အလွန်တင့်တယ်သောအရောင်များမရှိသော်လည်းတရုတ်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပို၍ သေးငယ်သောအရွယ်အစားသေးငယ်။ အရောင်အသွေးစုံ။ အရောင်အသွေးစုံလင်သောအရောင်မျိုးစုံပေါ်ထွက်လာစေရန်သုံ့ပန်းမွေးမြူခြင်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည်။ koi.
Koi သည်အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းမှရရှိသောအခြားအစ်မမျိုးစိတ်များနှင့်မတူဘဲအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်လူကြိုက်များလာသည်။ သိပ္ပံပညာအရဂျပန်နိုင်ငံရှိ Koi သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၂၀ ရာစုအစတွင်အနီရောင်သယ်ဆောင်ထားသည့်ရောင်စုံငါးကြင်းပါသောဂျပန် koi ရေကန်များကအလှအပကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသောထိုတိရစ္ဆာန်များကိုမွေးမြူခြင်းမှာသိသိသာသာကြီးထွားလာသည်။ ။ ဤရေကန်များသည်အာရှနယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိနိုင်ငံများနှင့်ပုံ၏ပင်လျှင်ပျံ့နှံ့သွားသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ငါးကြင်းမျိုးဆက်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Kois သို့မဟုတ် Carp ကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်နည်း။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Kois များဖြစ်လာသည် ပြည်တွင်းငါးတန်းတူထူးချွန်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဝါသနာကိုစတင်ပြီးဂရုစိုက်မှုသိပ်မလိုအပ်တဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီဟာကိုအကောင်းဆုံးအကြံပြုလိုက်ခြင်းဟာအသွင်အပြင်နဲ့အရောင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုထိထိရောက်ရောက်ရိုက်ခတ်နိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့ငါးပြတိုက်တွေမှာအောင်မြင်မှုရဲ့အာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကန်များ။
ငါးကြင်းငါးသို့မဟုတ် Kois အတွက်ကြိုတင်ရွေးချယ်မှုရှိသည် အလယ်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ အစာစားနိုင်ရန်အတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်သွားတတ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အုပ်စုငယ်များဖြင့်စုပေါင်းပြီးစုစုပေါင်းအထိနေထိုင်နိုင်သည် 6-7 တစ် ဦး ချင်းစီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့ဟာအထူးသဖြင့်သေးငယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်ဇာတ်ကောင်ကိုပြသနိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေသည်သေးငယ်ပြီးလူ ဦး ရေထူထပ်သောငါးမွေးမြူရေးခြံများတွင်အလေးထားသည်၊ ၎င်းငါးများသည်မည်မျှငါးမျှားသည်ကိုလေ့လာရန်လွယ်ကူသည်။ ရန်လိုပြproblemsနာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုပုံမှန်လှည့်လည်နေသောငါးများကဲ့သို့သောငါးသေးငယ်သည့်သိုလှောင်ကန်များ၌၎င်း၊ နမူနာအမြောက်အများနှင့်အတူနေထိုင်သောငါးမွေးကန်များတွင် - ၄ င်းတို့ကိုထားရန်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤငါးများအတွက်အာကာသသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ညီမျှသို့မဟုတ်ရေ 90 လီတာထက်သာ။ ကြီးမြတ်.
ဤတိရိစ္ဆာန်များသည်ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အလွန်လိုက်လျောညီထွေရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ရေ၏အပူချိန်သည်ပြproblemနာကြီးမဟုတ်ပါ။ ရွေးချယ်မှုပေးထားပေမယ့်ဒီသေးငယ်တဲ့ရွက်ဖျင်တဲ သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့အအေးသည်းခံမြင့်မားသောအပူချိန်များသည်ရေထဲတွင်အောက်စီဂျင်ချို့တဲ့ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ငှားရမ်းလုပ်သားများအတွက်သေစေလောက်သည့်အထိအပူရှိန်ထက်အလယ်အလတ်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်သည်။ ရေကန်ငယ်များတွင်ပင်ဤသေးငယ်သောတိရိစ္ဆာန်များသည်နှင်းခဲများကိုပင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Professional အစားအစာဖြစ်လိမ့်မယ် ...
Sera - အရောင် Koi သဘာဝ၊...
JBL နွေရာသီအစားအစာ ...
အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့သည် omnivores များ (အသားစားများနှင့်ပိုနီးစပ်သည်) ဟုပြောပြီးသား ဖြစ်၍ မရူးပါနှင့်။ နှင့်အတူ မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သော flake-shaped feed တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အထူးပြုလျှင်လုံလောက်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကပိုကြွယ်ဝပြီးပိုကွဲပြားတဲ့အစားအစာကိုခံစားချင်ရင်သူတို့ကိုငါတို့ပေးနိုင်ပါတယ် သေးငယ်သောအင်းဆက်ပိုးလောင်းလောင်းများကဲ့သို့အစာစားပါ ကြောင်းငါးဖမ်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင်အချို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်မည်သည့်အခါမျှမနာကျင်ပါ၊ သဘာဝဟင်းသီးဟင်းရွက်များသူတို့ကိုယ်တိုင်သေးသေးလေးများကိုက်တတ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာလိမ့်မည်။ ဆောင်းရာသီမှာ Kois နဲ့ carp သေးသေးလေးတွေဟာလုပ်ငန်းစဉ်ထဲကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိထားရမယ် သေမင်း၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုသိသိသာသာလျှော့ချသော, အရာ, ဇီဝြဖစ်လျော့နည်းခြင်းနှင့်အကျိုးဆက်အား, တိရစ္ဆာန်ရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုဆိုလို။ သူ့ကိုအစာကျွေးသောအခါသူသည်အစားအစာကိုမစားဘဲအလွန်နည်းသောပမာဏမျှမပြုလုပ်ကြောင်းသတိပြုမိပါကအလွန်အကျွံစိတ်မချရခြင်းမှာအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကြောင့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အလွန်အရေးကြီးသောပြissueနာမှာရေစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးမွေးကန်သို့မဟုတ်ရေကန်တွင်စစ်ထုတ်ခြင်းကိုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်လုပ်ဆောင်ရမည် ပြင်ပမရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးများသည် filter မပါသောငါးပြတိုက်ငယ်တစ်ခုတွင်ရှိလျှင်ဤရေသတ္တဝါသည်ရေတွင်ရှိသောအောက်ဆီဂျင်၏အရည်အသွေးကိုများစွာကျဆင်းစေသည်။ ပြင်ပစစ်ထုတ်တစ်ခုပေါ်တွင်လောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် ဤကဲ့သို့သော.
ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးမွေးမြူရေးအတွက်ငါးအမျိုးမျိုးမျိုးစိတ်များကမ်းလှမ်းသည်။ တူညီတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်သော်လည်းအများအပြားရှိပါတယ် ငါးမျိုးစိတ်များ အရောင်များနှင့်ပုံစံများကိုများသောအားဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအတွက်တဲ။ အဖြစ်လူသိများ "အမေရိကန်ကြယ်တံခွန်" ၎င်းသည်အနည်းဆုံးဂရုစိုက်မှုလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အကျယ်ပြန့်ဆုံးမျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အယပ်တွေကကြာကြာမထားဘူး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကပိုပါးတယ်။ သူနောက်တော်သို့လိုက်သည် ရူကင်း o "ကုလားကာ၏အမြီး"အတော်လေးကြာမြင့်စွာအယပ်နှင့်ဆူညံသောခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်ရာ။ အဆုံးစွန်သောအရာများသည်“ ဆုတောင်းခြင်း” နှင့်“ ဆုတောင်းခြင်း” တို့ဖြစ်သည် "ခြင်္သေ့ခေါင်း"ဒီမျိုးစိတ်အလွန်ဝိသေသ cephalic papillae သယ်ဆောင်ပေမယ့်။ ဤသုံးခုသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန့်ပြန့်ကျယ်ပြန့်စွာတည်ရှိသည်၊ သို့သော်လှပသောအခြားအလှအပများစွာကိုလည်းထပ်ဖြည့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါး၏ » ရေချိုငါးမွေးကန် » ရေအေးငါးမွေးကန် » ငါးကြင်း
Liz sifuentes ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာပထမပုံမှာလိမ္မော်နဲ့တူတဲ့တဲ ၂ ခုရှိတယ်။ သူတို့လိမ္မော်ရောင်မဟုတ်ကြဘူး၊ ငွေရောင်ပဲ။ ပြproblemနာကတစ်ယောက်ကအနီရောင်ပြောင်းနေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောဂါတစ်ခုလား၊ အစားအစာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အခြားတဲတစ်လုံးလဲ။ ငွေအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်
Liz Sifuentes အားစာပြန်ပါ
မူအရဤမျိုးစိတ်သည်ငါးကြင်းမဟုတ်ပါ၊ သူတို့မှာတူညီသောအရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အလွန်ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သတိပြုပါ၊ ကြောင်တစ်ကောင်သည်မည်သည့်အရာကမှပျားဖောင်းမရှိခြင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထို carpin ဟုတ်ကဲ့သူတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသောအရောင်များမျိုးစိတ်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ပင်အမြီးနှစ်ခုရှိသည်, သူတို့ကတရုတ်ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့သူတို့ကလူသားစားသုံးမှုအတွက်ထမြောက်ကြသည်။
အဆိုပါငါးကြင်းလည်း, ဒါပေမယ့်သူကကွဲပြားခြားနားသည် ... မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါသည်သင်တို့၏မေးခွန်းဖြေဆိုရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သင်ဖမ်းမိသောငါးအားလုံးသည်ရေထဲတွင်အောက်ဆီဂျင်အလုံအလောက်လိုအပ်သည်ကိုသင်သတိရသင့်သည်။ ရေကိုလျှပ်စစ်နည်းဖြင့် (devices) ဖြင့်အောက်စီဂျင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အကြံပြုချက် - ရေကန်ကိုပြောင်းလဲပြီးအစားအစာများကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားပါ။ သင့်အားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ သူတို့သိသည်ဟုမည်သူမျှမပြောပါ။
Commons carp သည်အခြားလူ ဦး ရေကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်သည့်လူနည်းသောတိရစ္ဆာန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသောအရွယ်အစားများရောက်ရှိလာသည့်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Annette alvarez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါဆိုသည်ကားဂေါက်သီးနှင့်ရွှေငါးများသည်ကြယ်တံခွန် (သို့) ပျံ့သောအမြီးဖြစ်ပါစေ၊ သငျသညျအခြို့သောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အရောင်နှင့်အတူနမူနာဝယ်နိုင်ပါတယ်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူက၎င်း၏မိဘများနှင့်ဘိုးဘေးတို့ကရရှိတဲ့အရောင်အရောင်ရရှိသောကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၎င်း၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အရောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောကြီးထွားမှုနှင့်အမြင်အာရုံကိုဟန့်တားနိုင်သည့်အပြောင်းအလဲအချို့ရှိကြောင်းဆုတောင်းခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ခွဲစိတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်နှင့်ပိုလျှံဖယ်ရှားပစ်။ ငါမေ့ဆေးအောက်မှာနေစဉ်သင်တန်းအနည်းငယ်ပွုပါပွီကြောင့်သင့်လျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်အတူရေထဲကစားပွဲပေါ်ပြုမိသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့၌ငါလုံးဝအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုလည်းဖယ်ထုတ်ပစ်ရန် ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရာတစ်ခုလည်းကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီသုံးသပ်ချက်ကမင်းကိုအကျိုးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဥရုဂွေးမှဖြစ်ပြီးသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မည်သည့်မေးခွန်းများမဆို Annette ကိုလေးစားသည်
Annette Alvarez အားပြန်ပြောပါ
Horace Paez ဟုသူကပြောသည်
ငါ cyprinids အဘို့ငါးပျံသန်း, ငါးကြင်းနှင့်ဆံပင်မျိုးကွဲအများကြီးရှိပါတယ်, ပုံမှန်ဘဝ၌နှင့်ငါးကြင်းငါးဖမ်းနိုင်ငါးကြင်းငါးဖမ်းများအတွက်ဆူအောင်မ။ (၄၇) ကောင်ရှိပေမယ့်သူတို့ကအ ၀ လွန်နေတယ်။ facebook com / flyfishingsevilla
Horacio Paez အားပြန်ပြောပါ
Liz: ယခင်အဖြေများကိုမယုံဘဲအကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ သင်၏ငါးသည်အသက်မည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည် ၃ နှစ်အောက်ကလေးများဖြစ်ပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုမှာပုံမှန်ဖြစ်သဖြင့် အဖြစ်များသောငါးကြင်းသို့မဟုတ် koi ဖြစ်ရပ်များမွေးဖွားခြင်းမှသည် ၃ နှစ်အရွယ်အထိရွှေမျိုးစိတ်များ၌ရှိသကဲ့သို့၊ စဉ်ဆက်မပြတ်အရောင်ပြောင်းလဲမှုသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ အကြိမ်များစွာငါငါးသေးငယ်သောငါးကိုရွေးချယ်ဖူးသော်လည်းများသောအားဖြင့်အရောင်ပြောင်းသည်အထိ ၃ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရပ်မှာအများစုကအနီရောင် (သို့) လုံးဝလိမ္မော်ရောင်အရောင်တွေကိုရတတ်ကြတယ်
ဥပမာ ၃ ခု၊ အ ၀ တ် aketas နှင့်နောက်ကျောအနက်ရောင်၊ ၎င်းသည်လုံးဝလိမ္မော်ရောင်နှင့်အဆုံးသတ်သည်။ လိမ္မော်ရောင်သည်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်။ လိမ္မော်ရောင်သည်လိမ္မော်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလယ်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဦး ခေါင်းတွင်သိုမှီးထားခြင်းကြောင့် ၃ သည် carassius (သို့) (goldfish) ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်
ကောင်းပါပြီကျွန်ုပ်မှာ ၁ မီတာ D ကြာမြင့်စွာ X ၀.၄၀ CN D အမြင့်နှင့် ၀၀၃၀ D အကျယ်ရှိငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှိသည်။
အိမ်နီးချင်းတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်သည်ငါးကြင်းငါးကန်ကိုချထားနိူင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ ၄ င်းတို့တွင်အပြည့်အ ၀ ရှိသည်။ ကြောင်အစာကိုစားကြသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၀ လီတာခန့်ရှိသောရေကန်တစ်ကန်ကိုလုပ်ပြီးငါး ၆ carp ငါးဝယ်ခဲ့သည်။ တစ်ပတ်တွင်၎င်းတို့အားအနည်းငယ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် koy အတွက်အစားအစာဖြင့်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ကျွေးပါသည်။ သူတို့တွေအရမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတာပုံမှန်လား။ ကျွန်ုပ်၏မြို့ Santiago de Chile တွင်တစ်နေ့လျှင် ၁၄ ဒီဂရီနှင့်ည ၇ နာရီခန့်တွင်ဆောင်း ဦး ရာသီရှိသည်။
ငါ bs pvcia တောင်ပိုင်း bahia blanc မြို့မှအာဂျင်တီးနား ... ဆောင်းရာသီတွင်ငါးကြင်းနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းပါ။ စပိန်လိုနိုင်ငံများမှာအလွန်အမင်းအေးခဲ။ ငါးမျှားတတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ငါမရရှိနိုင်ကြဘူး ... သူတို့ကိုငါးမျှားနိုင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင်ငါ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ana Lilia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာအဝါရောင်လိုငါးရှိတယ်၊ သူတို့ကရွှေ koi လို့ပြောကြတယ်၊ ဒါကအများကြီးကြီးထွားနေလားဆိုတာငါသိချင်တယ်
ana lilia သို့ပြန်သွားရန်
carp သည်ခရိုမိုဆုန်း ၁ တွင်ဗီဇမည်မျှရှိသနည်း။
RAUL RAMOS ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကိုငါအလွယ်တကူမသုံးနိုင်တဲ့ရေကူးကန်ထဲထည့်လိုက်ရင် ၄ နှစ်လောက်ရေမလုံလောက်တော့ဘူး၊ PH ကိုစမ်းကြည့်တယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ သူတို့ကလေဆာရောင်ခြည်လွှတ်ထားဖို့ပြောတယ်၊ ပလပ်စတစ်တစ်ဝက်ထက်နည်းသောလီတာ ၅၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
RAUL RAMOS သို့စာပြန်ပါ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းတွင်ကျွန်ုပ်၌ကြွယ်ဝသောငါးကြင်းပါသောရေကန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကန်ထဲတွင်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ရေကန်၏ပြုပြင်မှုကိုပြုလုပ်စဉ်မည်သည့်ရေလှောင်ကန်အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေသင့်သည်၊ အများဆုံးအကြံပြုအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ koi ငါးသည်အခြားငါးအမျိုးအစားများကိုပျက်စီးစေသလားဆိုတာကျွန်ုပ်သိချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြင်္သေ့မျက်နှာနောက်ငါးတစ်ကောင်သေနေလို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
David Bravo Morales အားပြန်ပြောပါ
က Denis ဟုသူကပြောသည်